Lataliye ka tirsan Xafiiska Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo mushaarkiisa ugu deeqay Dowladda Turkigu - Awdinle Online
Lataliye ka tirsan Xafiiska Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo mushaarkiisa ugu deeqay Dowladda Turkigu
April 2, 2020 (Awdinle Online) –Lataliye ka tirsan Xafiiska Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa mushaarkiisa ugu deeqay olole aruurin lacageed oo uu bilaabay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan dagaalka lagula jiro cudurka faafa ee coronavirus dartiis.
Cabdulqadir Maxamed Nuur, lataliyaha sare ee gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa ugu deeqay hal bil ​​mushaarkiisa ololaha la dagaalanka Covi-19, isaga oo sheegay in uu deeqdaas u sameeyay sababo la xariira in Dowladda Turkigu markasta garab taaganyahay dalalka la dulmiyay.
“Turkigu kaliya maahan mid daryeela naftiisa oo kaliya laakiin waxa ay daryeelaan dadka dulman oo dhan. Dadka Turkiga waxa ay Soomaaliya saaxiib kula ahaayeen xaalad walba, haatan waxaa la joogaa waqtigii aan garab istaagi lahayn dadka Turkiga, ”ayuu Nuur ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka oo ku qornaa luuqada Turkiga.
Waxa uu intaasi ku daray in bishaan mushaarkiisa ugu deeqay Turkiga si loo gargaaro shacabka Turkiga oo dhaqaalo yari ka cabanayo sababo la xariira saamaynta xirnaashaha suuqyada Caalamka.
Dadka isticmaala Twitterka waxa ay soo dhaweeyey Farriinta Diplomaasigaasi, waxayna intooda badan taageero u muujiyeen Soomaaliya iyo Turkiga.
Wargeyska Daily Sabah waxa uu ugu dambayntii xusay in C/qaadir Maxamed Nuur haatan ku magacaaban yahay Gacan-yaraha Xoghayaha Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Caasimadda Turkiga ee Ankara.
CabdiQaadir Maxamed Nuur oo loo Garan Ogyahay Jaamac Jaamac Horayna usoo Noqday taliye xigeenkii labaad ee Haya’ada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa talabaadan qaaday in Madaxda dalka Soomaaliya ay ku baaqeen in laga istaago Shacabka Soomaaliyeed madaama uu Xirnaanshiyaha Carona darted dhaqaale xumi dalka ka dhici karto.
Waxaa uu xusid mudan in sidoo kale madaxda Dalka ay ku baaqeen in garab istaag loo muujiyo Shacabka aan heysan agab caafimaad oo ku filan balse Cabdulqaadir Maxamed Nuur diblumaasigan ka tirsan Xafiiska Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal.
Dalkeena Soomaaliya ayaa waxaa la helay 5 Kiis Sedex kamid ah ayaana Muqdisho laga helay Waxaana taasi ay keentay Bandow la saaray Kulamada Bulshada iyo sidoo kale goobaha waxbarashada guud ahaan dalka.
Balse Bandhowga la saaray duulimaadyada caalamiga ah ayaa keentay in Dhaqaale yari badani ay soo foodsaarto Ganacsato Soomaaliyeed.
Ambasaddor Cabdi Qaadir ayaa talabadan qaaday isaga oo ka jawaabay Codsi ka yimid madaxwaynaha turkeyga Rajab Dayib Erdogan taasoo ahayd in la caawiyo Muwaadiniinta Turkish-ka ah ee Dhibaatada Dhaqaale uu kasoo Gaaray Covid 19.
Geesta kalena kama aanu jawaabin Codsi kaas lamid ah oo kasoo Baxay madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi farmaajo,Raisul wasaaraha iyo Wasiirka Caafimaadka kuwaas oo si wadajir ah Bulshada ugu baaqay in ay caawiyaan Dadka dhibateysan kuwaas oo Nugul in uu gaaro Covid 19.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale ka digay dhaqaalo yaro ka dhalata Xanuunka Covid-19 oo Caalamka dhibaato ku haaya waxa uu sheegay in loobaahanyahay garab istaaga Shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Turkiga, Rajab Dayib Erdogan waxa uu maalintii Isniinta ee la soo dhaafay ku dhawaaqay Olole Qaran oo lagu ururinayo Tabarucaad Dhaqaale, si loogu caawiyo Muwaadiniinta Turkish-ka ee ay dhibaatadda dhaqaale ka soo gaaray Caabuqa COVID 19.
Dalka Turkiga waxaa ilaa iyo haatan Xanuunkaasi ugu geeriyootay 277 qof, iyada oo 15,679 qof la diiwaan geliyey inuu ku dhacay cudurka, sida uu sheegay Wasiirka Caafimaadka ee dalkaasi, Faxredin Kooja.
Wasiirka oo shalay qabtay Shir Jaraa’id waxa uu sheegay inuu Caabuqaasi ku faafay dhamaan 81 Gobal ee uu ka kooban yahay dalkaasi, Iyadoo magaalladda Istanbuul laga helay xadiga ugu badan ee dalkaasi, iyadoo uu 8,852 qof uu haleelay COVID 19.
Previous articleDoorasho Daboolan iyo Damac aan Dhamaanin!
Next articleBanaanbax ka dhacay baraawe oo lagu taageeray doorashadii guddoonka Baarlamaanka Koonfur galbeed:-(Sawiro)
Ciidamada Dowladda oo weeraray Jabhadda Janeraal Xuud